Iphupha malunga neNtlekele yeNdalo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iinkanyamba kunye neenkanyamba, iinyikima, i-avalanches, izikhukula kunye namaza olwandle, ukuqhuma kwentaba-mlilo okanye ifuthe lesibhakabhaka - iintlekele zendalo zihlala zisisisongelo esikhulu ebantwini. Iintlekele zendalo zikwanxulumene neentsomi. Kuthiwa inyikima enkulu yabangela ukutshona kweAtlantis ngelo xesha. Iintlekele zendalo zihlala zithetha ukuphulukana nezinto ezibonakalayo kwabo bachaphazelekayo, kodwa kwangaxeshanye zihlala zisiba mbi, oko kukuthi, ukwenzakala okanye nokubi ukufa zabantu.
Ngaphandle kwengozi yentlekele yendalo eWachelt, amaphupha ethu angaba malunga nomsitho onje. Siziva sisoyika kwaye singazithembi, asazi ukuba masiziphathe njani, siziva singenamandla ebusweni bamandla otshabalalisayo endalo. Kodwa ke, atolikwa njani loo maphupha?
1 Uphawu lwephupha «intlekele yendalo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intlekele yendalo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intlekele yendalo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intlekele yendalo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ekutolikeni ngokubanzi kwamaphupha, iintlekele zendalo zihlala zisetyenziswa njengophawu okanye imiqondiso engemihle. uphuhliso Ndiyaqonda. Ukulala kulinda okwethutyana, okunokulawulwa lilishwa kunye namava amabi. Ukuphupha okunokwenzeka kusongela ukuphulukana nolawulo lwento kubomi bokwenyani kwaye kufuneka unikezele kwimeko. Kubalulekile ukuba ucinge ngemeko yangoku el mundo ukuvuka kwaye, ukuba kukho imfuneko, ngenelela ngenkuthalo kwinto eyenzekayo.
Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba umntu ekuthethwa ngaye uqokelela iimvakalelo zangaphakathi kwaye akazivumeli ukuba zikhuphe. Ngokukodwa imvakalelo Wut Inokuba ibaluleke kakhulu kwingqondo yakho, unomsindo kakhulu ngomntu omnye okanye nangaphezulu, kodwa awuyibonisi le mvakalelo kwilizwe langaphandle. Kubalulekile ukuba ufunde ukujongana kunye nokulungisa iimvakalelo zakho. Ukuba uqhubeka uyiqokelela ngaphakathi, inokukhokelela kwintlekele kubomi bakho bokwenyani.
Ukusuka kumbono oqhelekileyo, iphupha leentlekele zendalo zihlala zinjalo utshintsho uphawu ebomini okanye kwisazela somntu ochaphazelekayo. Okanye utshintshe indawo ethile yobomi bakho bobungcali okanye wabucala, mhlawumbi ngomsebenzi omtsha okanye ekuqaleni okanye ukuphela kobambiswano, okanye isimo sengqondo sangaphakathi kunye nokuqiniseka kuyasokola. Intlekele yokusingqongileyo ephupheni ibonisa indlela oku kutshatyalaliswa ngayo kwaye ekugqibeleni kufakwe enye entsha.
Uphawu lwephupha «intlekele yendalo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, izinto zendalo zihlala zifanekisela iinxalenye zangaphakathi, iimvakalelo zethu, umphefumlo kunye nengqondo. Ke ukuba sihlangabezana nentlekele yendalo ephupheni oku kubonisa Ukungalingani okanye ingxaki kwezi ndawo.
Kunokwenzeka ukuba umntu ekubhekiswa kuye akashiyi indawo eyoneleyo yeemvakalelo zabo kubomi bokwenyani kwaye uyabacinezela. Mhlawumbi uziva ukhathazwa yimeko ethile okanye ucinga ukuba uphulukana nolawulo lobomi.
Abanye oochwephesha bengqondo bacinga ukuba iintlekele zendalo emaphupheni zibangela ubundlongondlongo, iimvakalelo ezonakalisayo Unokufumana intetho. I-subconscious ibuza umntu ochaphazelekayo ngephupha ukuba azikhathalele ezi zinto, aziqonde, azamkele kwaye afunde ukufumana isisombululo kubomi bemihla ngemihla esenza okufanelekileyo kwiimvakalelo zakhe.
Uphawu lwephupha «intlekele yendalo» - ukutolika kokomoya
Intlekele yendalo inakho ngokwendlela yokomoya ephupheni. Ukungaqiniseki ngokomoya umboniso. Nangona kunjalo, iphupha kufuneka libe nethemba lokuba liyakusinda kweli nqanaba kwaye lifumane ukucaca.
Kwangelo xesha, inhlekelele yendalo ephuphileyo ingasetyenziswa kweli nqanaba lokutolika. amandla okomoya kunye isiporho zifanekiselwa.